भाइरसले शरीरमा कसरी आक्रमण गर्दछ ? – Lokpati.com
सरकार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री मृत्यु अमेरिका केपी शर्मा ओली अपराध पक्राउ नेपाल प्रहरी नेपाली काँग्रेस राशिफल चितवन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड
तपाईं हामी सबैले बाल्यकालमा स्कूल पढ्ने समयमै विज्ञान विषयमा भाइरसको सामान्य ज्ञान हासिल गरिसकेको छौं। यो पढ्ने बेला मेरा लागि अति नै रोचक लाग्ने विषयवस्तु थियो। भाइरस एक सब–माइक्रोस्पिक संक्रामक एजेन्ट हो, जसले जीवको जीवित कोशिकाभित्र मात्र नक्कल गर्दछ भन्ने कुरा तपाईं हामी सबैलाई अवगत नै छ। भाइरसले जीवजीवन र बोटबिरुवादेखि लिएर सुक्ष्मजीवहरु ब्याक्टेरिया र आर्चिया लगायतका सबै प्रकारका जीवन फार्महरु संक्रमित गर्न सक्छ।
विश्वमा करीव ५००० भाइरस प्रजातिहरुबारे विस्तृत रुपमा वर्णन गरिएको छ। वातावरणमा लाखौं प्रकारका भाइरसहरु पाइन्छ। भाइरसहरु पृथ्वीको लगभग सबै पारिस्थितिक प्रणालीमा पाइन्छ र भाइरस सबैभन्दा धेरै प्रकारको जैविक इकाई हो। भाइरसको अध्ययनलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। संक्रमित कोषभित्र वा सेलमा संक्रमित हुने क्रममा नभएको बेला भाइरस स्वतन्त्र कण वा भाइरसको रुपमा अवस्थित हुन्छन्। आनुवंशिक सामग्री अर्थात् डिएनए र आरएनएका लामो अणुहरु, जुन संरचनाको इन्कोड गर्दछ।
जीवको विकासवादी इतिहासमा भाइरसहरुको उत्पत्ति अस्पष्ट छ। कुनै भाइरस प्लाजिमडबाट विकास भएको हुन सक्छ। भाइरस डिएनए कोषहरुको बीचमा सार्न सकिन्छ भने कोही ब्याक्टेरियाबाट विकसित भएको हुन सक्छ। विकासको क्रममा भाइरस तेस्रो जीन ट्रान्सफरको महत्वपूर्ण साधन हो, जसले यौन प्रजननका लागि एकरुप हुने आनुवंशिक विविधता बढाउँछ। केही व्यक्तिले जीवनको रूपमा लिन्छन्, किनकि तिनीहरू आनुवंशिक सामग्री बोक्छन्, प्रजनन गर्दछन् र प्राकृतिक चयनको माध्यमबाट विकसित हुन्छन्। यद्यपि तिनीहरूमा मुख्य विशेषताहरू (जस्तै सेल संरचना) को अभाव हुन्छ, जुन सामान्य रूपमा जीवनको रूपमा गणना गर्न आवश्यक मानिन्छ। किनभने तिनीहरूसँग केही तर सबै त्यस्ता गुणहरू छैनन्। भाइरसलाई ‘जीवनको किनारमा जीवहरू’ र प्रकृतिकर्ताको रूपमा वर्णन गरिएको छ।
भाइरस धेरै माध्यमबाट फैलिन्छ। एउटा प्रशारण मार्ग रोगवाहक जीवहरूको माध्यमबाट हुन्छ, जसलाई भेक्टरहरू भनिन्छ। उदाहरणका लागि, भाइरसहरू प्रायः बोटबिरुवाबाट बोटबिरुवामा कीराहरूद्वारा सार्छ, जुन बोटको बोटमा खुवाइन्छ, जस्तै एफिडहरू र जनावरहरूमा भाइरसहरू रगत पिउने कीराहरूद्वारा सार्न सकिन्छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरस खोकी र छींकद्वारा फैलिन्छ। नोरोभाइरस र रोटाभाइरस, भाइरल गैस्ट्रोएन्टेरिटिसको सामान्य कारणहरू, मलको माध्यमबाट प्रसारित हुन्छ (मौखिक मार्ग, सम्पर्कको माध्यमबाट पारित हुन्छ र खाना वा पानीमा शरीरमा प्रवेश गर्दछ।
एचआइभी भाइरस यौन सम्पर्कमार्फत् र संक्रमित रगतको जोखिमद्वारा प्रसारित हुने धेरै भाइरसहरूमध्ये एक हो। होस्ट सेलहरूको विविधता, जुन भाइरसले संक्रमित गर्न सक्छ, यसलाई ‘होस्ट दायरा’ भनिन्छ। यो संकुचित हुन सक्छ, यसको मतलब भाइरस केही प्रजातिहरूलाई संक्रमित गर्न सक्षम छ वा फराकिलो ? यसका आधारमा नै भाइरसले धेरैलाई संक्रमित गर्न सक्षम छ।
कोरोनाभाइरस रोग (कोभिड–१९) एक संक्रामक रोग हो, जुन भर्खरै पत्ता लागेको हो। कोभिड–१९ भाइरसले संक्रमित धेरै व्यक्तिहरूले हल्कादेखि मध्यम श्वास रोगको अनुभव गर्नेछन्। केही मानिस विशेष उपचारको आवश्यकताबिना नै स्वास्थ्यलाभ हुन्छन्। पाको उमेरका व्यक्तिहरू, हृदय रोग, मधुमेह, दीर्घकालीन श्वास रोग र क्यान्सर जस्ता अन्तर्निहित चिकित्सा समस्याहरू भएका मानिसहरु यस भाइरसबाट संक्रमित हुने जोखिम बढी हुन्छ।
कोरोना भाइरसको शिघ्र प्रशारण रोक्नका लागि कोरोना कसरी फैलिन्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नु आवश्यक छ। नियमित हात सफा राख्ने, सम्भावित जोखिमबाट बच्न मानिसहरुसँग निश्चित दूरी कायम राखेर सम्बन्ध राख्ने, सेनिटाइजरको प्रयोगजस्ता माध्यमबाट यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ, जुन कुरा सरकार र देशका सञ्चार माध्यमहरुले बारम्बार प्रकाशित गरिरहेका छन्। यसलाई हामी पूर्ण सावधानीका साथ पालना गर्न जरुरी छ।
कोभिड–१९ भाइरस मुख्यतः थोप्लोको थोप्ला वा नाकबाट डिस्चार्जको माध्यमबाट फैलिन्छ, जब संक्रमित व्यक्ति खोकी वा छींक लाग्छ, त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले श्वासप्रश्वासको शिष्टाचार पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। श्वासप्रश्वासको प्रक्रियामार्फत् फैलिने भएका कारण हाम्रो आत्मअनुशासनमा नै यस भाइरसबाट बच्ने सुरक्षा पनि अन्तरनिहित छ।
आजको दिनसम्म कोभिड–१९ भाइरसको उपचारका लागि खास कुनै खोप र उपचार छैन। चिकित्सकहरुले अपनाएका परीक्षण विधि र उपचार पद्धतिहरु पनि वैज्ञानिक परीक्षणकै क्रममा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसबारे सोध कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ। आशा गरौं, चिकित्सा विज्ञान कोभिड–१९ को औषधी र उपचार पद्धति पत्ता लगाउन सफल हुनेछ।